पेट छाम्दा डल्लो परेको जस्तो महशुस हुन्छ ? नसोच्नुहोस् सामान्य, हुनसक्छ गम्भिर !! | सुदुरपश्चिम खबर
पेट छाम्दा डल्लो परेको जस्तो महशुस हुन्छ ? नसोच्नुहोस् सामान्य, हुनसक्छ गम्भिर !!
पेटको कुनै पनि भागमा दुखाईका साथ देखिने डल्लो के हो ? यो माथि छुँदा नरम र भित्र निकै गम्भिर हुनसक्छ।
धेरै जसो मामिलामा पेटमा डल्लो हर्नियाका कारण बन्ने गर्छ। पेटमा हर्निया तब हुन्छ जब पेटको मलद्वारको संरचना पेटको भित्ताको मांसपेशीमा कमजोरीका कारण धक्का दिन्छ। सामान्यतया यसलाई सर्जरीका माध्यमबाट ठिक पार्न सकिन्छ।
दुर्लभ मामिलामा शरीरको डल्लो हेमेटोमा वा एक लिपोमा पनि हुनसक्छ। यहाँसम्मकी दुर्लभ मामिलामा यो क्यान्सर वा ट्युमरको लक्षण पनि हुनसक्छ। यदी तपाईलाई पेटमा डल्लो देखिनुका साथै ज्वरो, वान्ता वा पीडा मध्ये कुनै लक्षण देखिए भने त्यसलाई वेवास्ता गर्न हुँदैन्।
प्रायः यस्तो किसिमको डल्लो आउने कारण हर्निया मानिने गरिन्छ। हर्नियाका विभिन्न प्रकार हुने गर्छन्। जसमध्ये प्रत्येकमा अलग अलग लक्षण हुने गर्छन्।
यसका मुख्य लक्षणमा खोकी लाग्ने, झुक्दा पीडा हुनु, डल्लो आएको ठाउँमा दुख्नु, भारीपन, कमजोरी, छातिमा पीडा, खाना निल्न समस्या आदी पर्छन्।
लिपोमा त्यहाँको डल्लो हो जहाँ त्वचाको तल एकीकृत भएर बस्छ। यो एक रबर जसरी फुलिएको महशुस हुने गर्छ। यसलाई धक्का दिदा केही हल्लिएको महशुस हुने गर्छ। नयाँ पुस्ता बाट सभार